Honor 10 Lite wuxuu ku qaataa Android 10 oo leh EMUI 10 qaab beta | Androidsis
Toddobaadyadan waxaan arkeynaa sida cusbooneysiinta Android 10 ay u gareyso taleefano badan oo suuqa ku jira. Hadda waa marki loo yaqaan 'Honor 10 Lite', oo ah nooc ku dhex-dhexaadsan nooca Shiinaha, taas ayaa la bilaabay ku dhawaad ​​sanad ka hor suuqa. Telefoonkani hadda wuxuu helaa beta-ka Android 10 oo leh EMUI 10.
Huawei wuxuu durbaba cusbooneysiinayaa qeyb ballaaran oo ka mid ah noocyadeeda, usbuucan la soo dhaafay beta-ka Android 10 ee EMUI 10 ayaa markii ugu horreysay la bilaabay. loogu talagalay moodel dhexdiisa ah. Calaamadda Shiinaha ayaa hadda ku sii socota moodel kale oo dhex dhexaad ah, sida Honor 10 Lite. Bishaaro wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Waqtigan xaadirka ah waxay bilowday inay ku cusbooneysiiso Shiinaha, sida caadiga. Isticmaalayaasha leh Honor 10 Lite waxay horey u heystaan ​​beta-ka Android 10 oo leh EMUI 10 oo laga heli karo waddanka, si ay u tijaabiyaan waxyaabaha cusub ee nidaamka hawlgalka iyo lakabka shirkadda u gaarka ah.
Wixii hadda waxba kama ogin fidinta beta-kan Dunida oo dhan. In kasta oo ay tahay inay dhakhso u dhacdo, haddii shirkaddu aysan samayn go'aanka ah inay sugto oo ay si toos ah u bilowdo nooca xasilloon adduunka, taas oo ah wax dhici kara kahor dhammaadka sanadka.
Warbaahinta qaar ayaa tilmaamaya taas bilowga Diseembar Android 10 ayaa lagu bilaabi karaa EMUI 10 si xasiloon loogu talagalay dadka isticmaala ee leh Honor 10 Lite. Ma ahan wax la yaab leh inay tan dhacdo, laakiin hadda waa xilli hore in la xaqiijiyo, maxaa yeelay waa inaan marka hore aragnaa haddii dhibaatooyin laga helo beta.
Si kastaba ha ahaatee, beta-ka Android 10 ee leh EMUI 10 durba waa xaqiiqo. Isticmaalayaasha Shiinaha leh Sharafta 10 Lite ayaa hadda heli kara oo hubaal toddobaadyo gudahood waa nooca xasilloon ee si rasmi ah loo bilaabay. Marka waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Honor 10 Lite wuxuu helayaa Android 10 beta oo leh EMUI 10